ဝိုင်နဲ့ချောကလက်တို့က အသက်ရှည်ရှည်နေစေနိုင် - YOYARLAY Digital Media and News
Published: December 6, 20199:05 am
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုက ဘဝမှာ တစ်ခုတည်းသော ကောင်းတဲ့အရာပါပဲ။ တစ်နေ့တာစားသုံးတဲ့ အစားစာတွေကလည်း သင့်တင့်မျှတမှုရှိမှသာ ကျွန်တော်တို့တွေ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ နေထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ချောကလက်နဲ့ဝိုင်တွေကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းဆိုးတဲ့အရာတွေထဲမှာ မပါဝင်ပါဘူးဆိုတာကို လေ့လာချက်တစ်ခုက ဆိုပါတယ်။ ချောကလက်နဲ့ ဝိုင်တွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်အောင် ပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေဆုံးမှုမဖြစ်အောင် (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်တောက်ပေးနိုင်ကြောင်း လေ့လာချက်အသစ်အရ သိရှိရပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေနဲ့ ညွှန်ကြားသူတွေက အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အမျှင်ဓာတ်ကြယ်ဝတဲ့အစားအစာ၊ ပရိုတင်းဓာတ်နဲ့ အစေ့အဆံတွေကို စားသုံးပေးဖို့အကြံပေးတဲ့အပြင် ဝိုင်တစ်ခွက်နဲ့ ကျန်းမာရေးညီညွှတ်တဲ့အစားအစာ(သို့) ချောကလက်ကို အချိုတည့်ပေးခြင်းကလည်း အသက်ရှည်ရှည် နေနိုင်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသက်အရွယ် (၄၅-၆၃)နှစ်ကြားပါဝင်သူ ၆၈,၀၀၀ကျော်နဲ့ လေ့လာစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်စွာ ဝိုင်၊ ချောကလက်တို့ကို စားသုံးခဲ့တဲ့လူတွေက မစားသုံးတဲ့သူတွေထက် ပိုပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ချောကလက်၊ ဝိုင်၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နဲ့ ဘီယာတို့က ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမြှင့်တတ်စေတဲ့ အန်တီအောက်စီဒန့်ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို တိုးတတ်ကောင်းမွန်စေတဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ ပြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ချောကလက်ကို တစ်နေ့ကို ၁၀၀ ဂရမ်စားသုံးမယ်ဆိုရင် အသည်းရဲ့ အင်ဇိုင်းဓာတ်တွေကို တိုးတတ်စေပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဝိုင်ကိုလည်း တန်ဆေးလွန်ဘေးမဖြစ်အောင် အလွန်အကျွံမသောက်သုံးပဲ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်သာ ချင့်ချိန်သောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Ref: Wine and chocolates can help you live longer. Here’s how!
Previous Previous post: မလေးရှားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့သည့် အောင်လအန်ဆန်နှင့် တီရဲလ်ထန်
Next Next post: လူတိုင်းလက်လှမ်းမီ ကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် ဥပဒေတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ဖို့ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုသွားမယ်
လူအများစုက ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးသော်လည်း နှစ်များစွာ နီကိုတင်းကို သောက်သုံးခဲ့ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုသည် ပြန်မကောင်းနိုင်တော့ဟု ယုံကြည်သည့်အတွက် ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် လွယ်လွယ်လက်လျှော့ တတ်ကြသည်။ Post Views: 2,284
Published: November 6, 20174:28 am Updated: February 15, 201912:07 pm
နေ့စဉ် ခြေလှမ်းတစ်သောင်းလျှောက်ပေးတာက အသက်ပိုရှည်စေမလား
တစ်နေ့ကို ခြေလှမ်းတစ်သောင်း လမ်းလျှောက်ပေးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့အင်မတန်ညီညွတ်စေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကြားဖူးနေကျဖြစ်ပါတယ်။ ခြေလှမ်းတစ်သောင်းဟာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ အလုပ်များတတ်သူတွေအတွက်တော့ ဝန်ပိစေတဲ့အရေအတွက်မို့ ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တိုက်စစ်ကြည့်ရအောင်။ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် အထူးပြုလေ့လာခဲ့တဲ့ သုတေသနရလာဒ်အသစ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ တစ်နေ့တာကို ခြေလှမ်း (၄၄၀၀)…
Published: June 25, 20195:04 pm Updated: June 26, 201912:31 am